သင့်ကိုလူတွေ ယုံကြည်စိတ်ချစေဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အချက် ၁၀ ချက် – Gentleman Magazine
သင့်ကိုလူတွေ ယုံကြည်စိတ်ချစေဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာဟာ သင့်ကို လူတွေ ယုံမယုံအပေါ် မူတည်ပြီး အသက်ရှင်နေတာပါ။ သင့်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန် ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်သူတွေက သင့်ကိုမယုံရင်တော့ ဝယ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ယုံကြည်မှုဆိုတာ အလိုလို ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုစုပျိုးထောင်ယူရတာပါ။ ဘယ်လို ပြုစုပျိူးထောင်မလဲ?? အောက်မှာ သင့်ကို ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ ခုကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၁. မအောင်မြင်တာတွေကို ဝန်ခံပါ
သင်မှားသွားရင် ဝန်ခံပါ။ အမှားလုပ်မိတာက စိတ်ညစ်ဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒိလို အမှားလုပ်မိတဲ့အခါမှာ ဝန်ခံလိုက်တာဟာ သင့်ကို လူတွေ ပိုယုံလာစေပါတယ်။ သင် အမှားလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ လူတွေသိပါတယ်။ အဲဒါကို ဝန်ခံလိုက်ခြင်းဟာ သင် တာဝန်ခံတတ်တယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တာပါပဲ။
၂. သင့်ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တွေ တပြေးညီ ဖြစ်နေပါစေ
တစ်ပြေးညီ ဖြစ်နေတာဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်နဲ့ သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တွေ အားလုံး အချက်အလက်တွေ တူတူ ဖြစ်နေရပါမယ်။ အဲဒိလို တပြေးညီဖြစ်နေမှ သင့် Brand ကို လူပိုယုံလာမှာပါ။
၃. တခြားသူတွေကို ချီးကျူးပါ
ချီးကျူးတာကို စိတ်ထဲက နှလုံးသားထဲက ပါအောင် ချီးကျူးပေးပါ။ သင်က တသ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ပုံကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရင် အဲဒိလူက သင့်ကို လေးစားလာမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဘဝထဲက လူအားလုံးကို ချီးကျူးနိုင်ပါတယ်။ သင်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ချီးကျူးနေတာ တွေ့ရင် လူတွေ သင့်ကို ယုံလာပါတယ်။
၄. ညှိနှိုင်းဈေးဆစ်မှုတစ်ချို့တစ်လေကို အရှုံးပေးလိုက်ပါ
လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ညှိနှိုင်းနိုင်မှုကြောင့် လူသိများပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နောက်လာမယ့် ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုကို သေချာစဉ်းစားပါ။ နိုင်ရင် ဘာရမလဲ? ရှုံးရင်ရော ဘာပေးရမလဲ? နိုင်ပေမယ့် သင့်နာမည် ပျက်သွားမလား? ကာလတို ညှိနှိုင်းတာကို ယူမလား? ကာလရှည် နာမည်မပျက်တာကို ယူမလား? စဉ်းစားပါ။
၅. “ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်” ဆိုတာကို ခဏခဏ မပြောပါနဲ့
လူတော်တော်များများဟာ အဲဒါကို ခဏခဏ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ကဲ.. အဲဒိလိုဆိုတော့ သင်က ပုံမှန်ဆို မရိုးမသား ဖြစ်နေပါသလား? သင့်ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ထုတ်ပြောပေးရတာနဲ့ လူတွေ သင့်အပေါ် ယုံကြည်မှုလဲ ကျသွားပါတယ်။
၆. တခြားသူတွေကို နားထောင်ပေးပါ
သင် များများပြောလေ၊ ယုံကြည်မှု ပျက်စီးသွားဖို့ များလေပါပဲ။ စကားများများ မပြောပဲ များများ နားထောင်ကြည့်ပါ။ နားထောင်တာဟာ သင်က သင်ကြားနိုင်တယ်၊ တခြားသူကို စာနာပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောနေတာပါပဲ။
သင့်အဝတ်အစားက သင့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အကျိုးအများကြီး သက်ရောက်ပါတယ်။ ကောင်းကောင်း ဝတ်စားထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ပိုပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ပြီး အပြည့်အဝ တာဝန်ယူပေးနိုင်ပုံ ပေါက်ပါတယ်။
၈. မသိဘူး ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောပေးပါ
ဘယ်သူမှ အကုန် မသိပါဘူး။ သင် ဘယ်လောက် စမတ်ကျကျ မသိတာတွေတော့ နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အတွက် မေးခွန်းတိုင်းကို အဖြေပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ထင်တာလျှောက်ဖြေမယ့်အစား မသိဘူး ပြောကြည့်ပါ။ ဝန်ခံတာဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးမြှင့်စေပါတယ်။
၉. တခြား သူတွေကို သင်သိတာတွေ ဝေမျှပေးပါ
သင့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို အကျိုးပြုပေးဖို့ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အသိပညာတွေကို FB မှာ ဝေမျှပေးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ သင့်ရဲ့ အသိပညာတွေ လူတွေကြားထဲရောက်သွားရင် သင့်နာမည်ကလဲ ယုံကြည်စိတ်ချရလာပါတယ်။
၁၀. ဂုဏ်ပြုဆုတစ်ခု ရယူပါ
ဂုဏ်ပြုဆုတစ်ဆုဟာ သင့်ရဲ့ ရိုးသားမှု၊ ယုံကြည်ရမှုကို အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုကနေ အသိအမှတ် ပြုလိုက်တာပါပဲ။ သင် ဆုတစ်ခုခု ရအောင် ကြိုးစားပါ။ သင် ဘယ်လောက် ရိုးသားတယ်ဆိုတာ ကျိန်တွယ်ပြနေတာထက် အဲဒိဆုကြီး စားပွဲပေါ် တင်ထားတာက ပိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဟာ ပျိုးထောင်လာလို့ရသလို ပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အလေးအနက် သဘောထားပြီး ကာကွယ်ပါ။ သင် ပိုပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အရေးကြီးဆုံးထားပြီး ကာကွယ်ပေးပါ။
သငျ့ကိုလူတှေ ယုံကွညျစိတျခစြဖေို့ ရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ အခကျြ ၁၀ ခကျြ
လုပျငနျးရှငျဆိုတာဟာ သငျ့ကို လူတှေ ယုံမယုံအပျေါ မူတညျပွီး အသကျရှငျနတောပါ။ သငျ့မှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ထုတျကုနျ ရှိမယျ။ ဒါပမေယျ့ ဝယျသူတှကေ သငျ့ကိုမယုံရငျတော့ ဝယျကွမှာမဟုတျပါဘူး။
ယုံကွညျမှုဆိုတာ အလိုလို ဖွဈလာတာ မဟုတျပါဘူး။ ပွုစုပြိုးထောငျယူရတာပါ။ ဘယျလို ပွုစုပြိူးထောငျမလဲ?? အောကျမှာ သငျ့ကို ပိုပွီးအောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈစမေယျ့ နညျးလမျး ၁၀ ခုကို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
၁. မအောငျမွငျတာတှကေို ဝနျခံပါ
သငျမှားသှားရငျ ဝနျခံပါ။ အမှားလုပျမိတာက စိတျညဈဖို့တော့ ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒိလို အမှားလုပျမိတဲ့အခါမှာ ဝနျခံလိုကျတာဟာ သငျ့ကို လူတှေ ပိုယုံလာစပေါတယျ။ သငျ အမှားလုပျနိုငျတယျဆိုတာ လူတှသေိပါတယျ။ အဲဒါကို ဝနျခံလိုကျခွငျးဟာ သငျ တာဝနျခံတတျတယျဆိုတာ ပွလိုကျတာပါပဲ။
၂. သငျ့ရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာအကောငျ့တှေ တပွေးညီ ဖွဈနပေါစေ
တဈပွေးညီ ဖွဈနတောဟာ ယုံကွညျစိတျခရြဖို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ သငျ့နဲ့ သငျ့ကုမ်ပဏီရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာအကောငျ့တှေ အားလုံး အခကျြအလကျတှေ တူတူ ဖွဈနရေပါမယျ။ အဲဒိလို တပွေးညီဖွဈနမှေ သငျ့ Brand ကို လူပိုယုံလာမှာပါ။
၃. တခွားသူတှကေို ခြီးကြူးပါ
ခြီးကြူးတာကို စိတျထဲက နှလုံးသားထဲက ပါအောငျ ခြီးကြူးပေးပါ။ သငျက တသျယောကျယောကျရဲ့ အလုပျလုပျနိုငျပုံကို အသိအမှတျပွုလိုကျရငျ အဲဒိလူက သငျ့ကို လေးစားလာမှာပါ။ သငျ့ရဲ့ ဘဝထဲက လူအားလုံးကို ခြီးကြူးနိုငျပါတယျ။ သငျက တဈယောကျယောကျကို ခြီးကြူးနတော တှရေ့ငျ လူတှေ သငျ့ကို ယုံလာပါတယျ။
၄. ညှိနှိုငျးစြေးဆဈမှုတဈခြို့တဈလကေို အရှုံးပေးလိုကျပါ
လုပျငနျးရှငျတှဟော သူတို့ရဲ့ ညှိနှိုငျးနိုငျမှုကွောငျ့ လူသိမြားပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ နောကျလာမယျ့ ညှိနှိုငျးမှုတဈခုကို သခြောစဉျးစားပါ။ နိုငျရငျ ဘာရမလဲ? ရှုံးရငျရော ဘာပေးရမလဲ? နိုငျပမေယျ့ သငျ့နာမညျ ပကျြသှားမလား? ကာလတို ညှိနှိုငျးတာကို ယူမလား? ကာလရှညျ နာမညျမပကျြတာကို ယူမလား? စဉျးစားပါ။
၅. “ရိုးရိုးသားသားပွောရရငျ” ဆိုတာကို ခဏခဏ မပွောပါနဲ့
လူတျောတျောမြားမြားဟာ အဲဒါကို ခဏခဏ ပွောတတျကွပါတယျ။ ကဲ.. အဲဒိလိုဆိုတော့ သငျက ပုံမှနျဆို မရိုးမသား ဖွဈနပေါသလား? သငျ့ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ထုတျပွောပေးရတာနဲ့ လူတှေ သငျ့အပျေါ ယုံကွညျမှုလဲ ကသြှားပါတယျ။
၆. တခွားသူတှကေို နားထောငျပေးပါ
သငျ မြားမြားပွောလေ၊ ယုံကွညျမှု ပကျြစီးသှားဖို့ မြားလပေါပဲ။ စကားမြားမြား မပွောပဲ မြားမြား နားထောငျကွညျ့ပါ။ နားထောငျတာဟာ သငျက သငျကွားနိုငျတယျ၊ တခွားသူကို စာနာပေးနိုငျတယျလို့ ပွောနတောပါပဲ။
သငျ့အဝတျအစားက သငျ့ရဲ့ ယုံကွညျစိတျခရြမှုကို အကြိုးအမြားကွီး သကျရောကျပါတယျ။ ကောငျးကောငျး ဝတျစားထားတဲ့သူတဈယောကျဟာ ပိုပွီး ပရျောဖကျရှငျနယျ ဆနျပွီး အပွညျ့အဝ တာဝနျယူပေးနိုငျပုံ ပေါကျပါတယျ။
၈. မသိဘူး ဆိုတာ ခဏခဏ ပွောပေးပါ
ဘယျသူမှ အကုနျ မသိပါဘူး။ သငျ ဘယျလောကျ စမတျကကြ မသိတာတှတေော့ နစေ့ဉျဘဝထဲမှာ ရှိနဦေးမှာပါပဲ။ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျအတှကျ မေးခှနျးတိုငျးကို အဖွပေေးဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ထငျတာလြှောကျဖွမေယျ့အစား မသိဘူး ပွောကွညျ့ပါ။ ဝနျခံတာဟာ ယုံကွညျစိတျခရြမှုကို တိုးမွှငျ့စပေါတယျ။
၉. တခွား သူတှကေို သငျသိတာတှေ ဝမြှေပေးပါ
သငျ့ရဲ့ ယုံကွညျစိတျခရြမှုကို တိုးတကျစဖေို့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုကတော့ ကမ်ဘာကွီးကို အကြိုးပွုပေးဖို့ပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံ၊ အသိပညာတှကေို FB မှာ ဝမြှေပေးခွငျးဟာ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးပါ။ သငျ့ရဲ့ အသိပညာတှေ လူတှကွေားထဲရောကျသှားရငျ သငျ့နာမညျကလဲ ယုံကွညျစိတျခရြလာပါတယျ။
၁၀. ဂုဏျပွုဆုတဈခု ရယူပါ
ဂုဏျပွုဆုတဈဆုဟာ သငျ့ရဲ့ ရိုးသားမှု၊ ယုံကွညျရမှုကို အသငျးအဖှဲ့တဈခုခုကနေ အသိအမှတျ ပွုလိုကျတာပါပဲ။ သငျ ဆုတဈခုခု ရအောငျ ကွိုးစားပါ။ သငျ ဘယျလောကျ ရိုးသားတယျဆိုတာ ကြိနျတှယျပွနတောထကျ အဲဒိဆုကွီး စားပှဲပျေါ တငျထားတာက ပိုအလုပျဖွဈပါတယျ။
ယုံကွညျစိတျခရြမှုဟာ ပြိုးထောငျလာလို့ရသလို ပကျြစီးနိုငျတယျဆိုတာ သတိပွုပါ။ သငျ့ရဲ့ ယုံကွညျစိတျခရြမှုကို အလေးအနကျ သဘောထားပွီး ကာကှယျပါ။ သငျ ပိုပွီးအောငျမွငျဖို့အတှကျ သငျ့ရဲ့ ယုံကွညျစိတျခရြမှုကို အရေးကွီးဆုံးထားပွီး ကာကှယျပေးပါ။
Previous: သင့်ချစ်သူကို ခံစားမှုအထွဋ်အထိပ်သို့ အမြန်ရောက်ရှိစေမည့် နည်းလမ်း(၄)ခု
Next: သင့်ကို မိန်းကလေးတွေ သိစေချင်ဆုံး အရာ ၁၀ ခု